Masjidka AL-Xarameyn ee magaalada Jowhar oo dib loo furay (Sawiro) | Jowhar Somali News Leader
Masjidka AL-Xarameyn ee magaalada Jowhar oo dib loo furay (Sawiro)
Masjid ay markiiba ku tukan karaan kumanaan ruux isla markaana si casri ah loo dhisay ayaa maanta laga furay magaalada Jowhar xarunta dowlad goboleedka Hirshabelle.
Salaada Jimce ee maanta ayaa lagu tukuday masjidka Al-Xaramayn oo bilooyinkii la soo dhaafay ay dhismihiisa ka wadeen magaalada Jowhar muxsiniin Soomaaliyeed oo iskaashaday.
Masjidkan oo la dhisay dhamaadkii lixdameeyadii ayaa dhowr jeer hore dayactir loogu sameyay hase ahaatee horaantii sanadkan ayaa gebi ahaanba masjidka dhismihiisii hore laga guuray waxaana dib loo dhisey masjidka oo laga dhigey hal dabaq iyadoo markiiba ay ku tukan karaan kumanaan ruux.
“Dhismaha masjidkan waxaa u istaagay dhalinyarada magaalada Jowhar waxaana ka qeybqaatay muxsiniin faro badan kuwaasoo hanti iyo xoogoodaba ku sadaqeystay sidii loo dhisi lahaa masjidkan oo heerar kala gedisan soo maray.”ayuu yiri Xaaji Axmed Xasan Cali oo ka mid ahaa guddigii dhismaha masjidka.
Xaaji Abuukar Muudey Cali oo ka mid ahaa guddigii ugu horeyay ee masjidkan ayaa u mahadceliyay dhammaan dadkii kaqeybqaatay dhismaha masjidka Al-xaramayn oo ku yaal bartamaha magaalada Jowhar gaar ahaan suuqa ugu weyn magaalada Jowhar.
Sidoo kale waxaa ka hadlay furitaanka masjidka mashaa’iq faro badan kuwaasoo ka hadlay fadliga uu u leeyahay qofka Muslimka ah inuu xoogiisa iyo hantidiisaba geliyo beytka Alle.
Guud ahaan mashaa’iqda ayaa isku raacay in ummada Soomaaliyeed haddii ay xoogooda iyo dhaqaalahooda ku tashadaan ay hirgelin karaan mashaariic faro badan.
Masjidka ayaa sidoo kale waxaa uu leeyahay qeyb loogu talogalay in dadka lagu baro diinta Islaamka iyadoo masjidkana uu yahay mid dad badan ay kitaabada ka aqrisan jireen.
Daawo Sawirada Masjidka Xaramayn Jowhar
Previous articleNuur Faarax “Ra’iisul Wasaaraha wuu ilduufay, Akoonka dowladda waxaa ku jirtay Shan Milyan”
Next articleBanaanbax looga soo horjeeday dowladda Maraykanka oo Muqdisho ka dhacay